देवः विकास बैंकका सेयरधनीले १७.१० %बोनस पाउने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउलान् ? Bizshala -
देवः विकास बैंकका सेयरधनीले १७.१० %बोनस पाउने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउलान् ?
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंकको एघारौं वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ।
संचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्यको अध्यक्षतामा काठमाडौमा सम्पन्न भएको हो ।
साधारणसभाबाट संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७३/७४ को मुनाफाबाट २०७४ कात्तिक २२ गतेसम्म कायम देवः विकास बैंक लिमीटेडको शेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने गरी तत्कालीन चुक्तापूँजीको १७.१० प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने तथा कर प्रयोजनका लागि ०.९० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको बताइएको छ ।
साथै, सोही सभाबाट देवः विकास बैंक लि.को साथसाथै साविक युनियन फाइनान्स तथा साझा विकास बैंकको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७३/७४ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा सोही मितिसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण समेत पारित गरियो ।
साथै सो सभामा देवः विकास बैंक लिमीटेडले आगामी आ.व.मा वेस्टर्न डेभलपमेण्ट बैंक लिमीटेडलाई प्राप्ति गर्ने समझदारी सम्पन्न भएको जानकारी समेत गराइएको थियो ।
काठमाण्डौ । त्रिपुरेश्वरको नेपाल आँखा अस्पतालद्वारा सर्लाही...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई ४.०५ प्रतिशत नगद...
प्रभू बैंकको ८% बोनस सेयर खाने मन छ ? आजसम्म बैंकको सेयर
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रभू बैंकले घोषणा गरेको ८...
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप नै गरेर भए...
-रमेश लम्साल काठमाडौँ । हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा...
जनता बैंक र मेडिसिटी अस्पतालबीच सम्झौता
काठमाण्डौ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र मेडिसिटि अस्पतालबीच बैंकका...
तीन सामुदायिक विद्यालयलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले नेपालको शिक्षा...
रियलटाइममा खाता खोल्न पाउने गरी माछापुच्छे बैंकद्वारा ५
काठमाण्डौ । माछापुच्छ«े बैंक लिमिटेडले चितवन, तनहुँ, लमजुङ, बागलुङ...